Jees jees kale oo fiican LibreOffice [+ Video] | Laga soo bilaabo Linux
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, Aplicaciones
En Laga soo bilaabo Linux Waxaan horey u soo dhajinay maqaallo dhowr ah oo ku saabsan soo jeedimaha qaar ee adeegsadayaal kala duwan ay ugu talagaleen isdhexgalka LibreOffice / OpenOffice.
Marka laga eego aragtidayda shakhsi ahaaneed, waxaan u maleynayaa in barta daciifka ah ee xafiiskani ay tahay si sax ah muuqaalkeeda, taas oo u eg qaababkii hore ee Microsoft Office tan iyo markii la aasaasay.
Hagaag, isticmaale iskiis isugu yeera elgat madow ayaa lagu daabacay Gnome-Fiiri nooc app ah oo lagu qoray Gtk3 taasi waxay noo ogolaaneysaa inaan aragno sida ay u shaqeyso fikraddaada isku xirnaanta garaafka ee 'Office Suite'.
Haddii aad rabto inaad ku aragto ficil ahaan, waa kan fiidiyaha:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Jees jees kale oo fiican LibreOffice [+ Video]
Waxaan u arkaa wax aad u xiiso badan oo qurux badan, waxaan u baahanahay inaan tijaabino si aan u aragno sida loo isticmaali karo runti. Waxaan u maleynayaa inay cadahay in libreoffice-ku uu u baahan yahay isbadal wanaagsan oo dhanka is dhexgalka ah si uu u gaaro dhagaystayaal balaaran
Cinwaanku waa "jaalle" maxaa yeelay run maahan inuu yahay jees jees loogu talagalay LibreOffice, waa uun jees jees codsi.
Ku jawaab Blablabla
Cinwaanka fiidiyowga iyo shaashadaha shaashadda ee leexashada wuxuu ku sheegayaa inay tahay LibreOffice.
Hal su’aal Miyaad dhib ku noqotay daawashada fiidiyowga? Sababtoo ah haddii aad arki lahayd, waxaad ogaan lahayd in dhamaadka la gaarayo, markii qoraagu u tago qaybta CUSUB, astaamaha LibreOffice ayaa soo muuqda.
Taasi waa, haddii intaas lagu daro, waxaad u kuur galeysa qabashada sawirka, waxaad awoodi doontaa inaad ogaato in cinwaanka gabi ahaanba uusan aheyn sidaad u qeexday. Si kastaba ha noqotee, maadaama aad xorriyadda u qaadatay inaad ku darto sifooyin qoraalkeyga, midna adigaan kuu dhigayaa: Troll ..
Oo waxaan la yaabanahay haddii aad dhibtay inaad akhriso sharraxaadda isla qoraagu ku bixiyo Gnome-Look.org.
Aan aragno ka hor intaanad qof ugu yeedhin "Troll" inay akhriyaan oo ay u kuur galaan waxa ay soo dhigaan oo ay dhahaan ...
Jid ahaan, waa ceeb in qoraaga balooggu laftiisu sifo aan fiicnayn u dhigo akhristayaashiisa. Waa maxay ceeb iyo maxaa la'aanta halista. Taasi way i dhibaysaa.
Miyaadan ahayn isla kan ku rogrogaya muylinux ahahah?
O_O… halkan ma u haajiraan? WTF!
Waad salaaman tahay, waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo:
Miyaanay jirin sifayn kale oo loo adeegsado, ama loo dhaho si ka gardarro yar waxaad ku tidhaahdo bilowga?
Waxaan ula jeedaa "cinwaanka tabloid."
Miyaanay jirin jid kale oo ka gardarro yar ama xadgudub badan oo lagu muujiyo aragtidaada?
Hagaag, sababta oo ah qaabka menusyada loogu kala urursaday tabsyada, waxay ahaan laheyd fikrad la mid ah Ribbon, in kasta oo Ribbon uu aad ugu raaxeysanayo dhadhankeyga maxaa yeelay wuxuu dhigayaa tabka shaashadda dusheeda.
Aynu nidhaahno tan jees jees Waxay i xasuusineysaa daalacayaasha shabakadda - oo aan ogahay inaynaan ka hadleynin, laakiin waxay i xasuusineysaa - sidii ay markii hore ahaayeen (oo leh tabs ka hooseeya menus-yada), Ribbon-na wuxuu u egyahay inay hadda yihiin (oo ay ku jiraan tabs xagga sare oo dhan) ).
Hagaag haa, wax ayaa laga qaadaa Ribbon, laakiin uma muuqdo wax xun. Ilaa iyo inta ay sifiican ufiirineyso, nuqul yar ma dhaawaceyso 😀
Laakiin waxa aan leeyahay Ribbon ayaa ka fiican. 😛
Cajiib! Waxay umuuqataa mid aad ufiican. Ma jiraa qof og in dadka LibreOffice ay qorsheynayaan inay hirgeliyaan isbeddel muuqaal ah ama uusan ku jirin mudnaantooda?
Ku jawaab FeRe
Haa, muddo dheer waxay raadinayeen is-dhexgal ka dhigaya nooca desktop-kooda moobilka mustaqbalka iyo noocyada websaydhka, xitaa waxay bilaabeen a jees jees laga bilaabo interface loo yaqaan 'Citrus', laakiin laba sano ayaa ka soo wareegtay markaa waxayna umuuqataa inay wali kujirto horumar.
Anigu ma isticmaalo tabs, dhab ahaan waa badhanno xakameynaya boggaga widget Notebook. XAFIISKA wuxuu leeyahay tabs si wanaagsan loo qeexay.
Waxaad jeceshahay badhannada kor ku yaal geeska bidix.
Haddii la sameyn karo, waa wax aad u fudud, kaliya beddel booska badhamada waana intaas. Laakiin way fiicnaan doontaa haddii aan isticmaalno qaab FLAT ah sida XAFIISKA ……… Iyadoo la adeegsanayo wehliyaha wejiga waxay u muuqan doontaa wax laga naxo.
Sidoo kale waa inaad tixgelisaa xaddidaadda maktabadaha Gtk 3.
Maktabadaha GTtk 3 ayaa ka maqan wijetiyada qaar.
Waa wax laga xumaado inaynaan lahayn PATHBAR Gtk 3.
Waan jeclahay jees jeeskaas 😀 Sida ay runta u tahay waxaan tusaa LibreOffice qofkasta oo aan aqaan.
xD haday aad ufiicantahay 😀
Waan ku cusubahay Linux dhawaanahan waan isticmaalayay. Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado sida loo rakibo mockup-kan.
Ku jawaab snogueras
Waa fududahay is-fulin ... Kaliya soo ururi CODE-ka aad uga tagtay GNOME-LOOK ...
Si aad u soo ururiso waxaad u baahan tahay oo kaliya inaad rakibto Maktabadaha Gtk3
ama haddii aadan aadin SYNAPTIC oo aad gasho mashiinka wax raadinta ee libgtk-3-dev.
Waxaad rakibaysaa dhammaan maktabadaha Gtk 3.
Waxyaabo kale ayaa ah inaad haysatid isku-duwaha GCC oo lagu rakibay.
Waxaad u sameysaa si isku mid ah, oo leh 'SYNAPTIC'.
Markaad soo dejiso koodhka waan furayaa. Waxaad arki doontaa afar fayl…. waxaa jira labo halkaan koodhka uga tagay.
Waxaad qaadataa mid ka mid ah QAADAYAASHA leh CODE + ICONS.
Waxaad ku dhejineysaa miiska dusha koodhka + astaamaha oo dhan.
Markaa waxaad kuheleysaa galka TERMINAL ..
Si tan loo sameeyo, dhagsii badhanka midig ee MOUSKA oo raadi ikhtiyaarka aad ku furto TERMINAL-ka
oo waxaad dhigtaa bayaanka soo socda gudaha TERMINAL:
oo aad ku diyaar garowdo FOLDER-ka waxaad yeelan doontaa auto-executable.
Sameynta laba cilx oo ku saabsan auto-executable waxay fulisaa BARNAAMIJKA.
Maaha wax weyn bandhigeygu waa uun fikrad.
Haddii aad shaki qabto, fariin iigu soo dir marianocordobario3@gmail.com
Mahadsanid. Waan isku dayi doonaa maxaa yeelay waa sida kaliya ee wax lagu baran karo.
Ma ahan Ribbon. Aaladda widget ee aan qoray, waxaan qaatay kaliya fikradda tabs, tan iyo markii aan tirtiray meerisyada ay leedahay LibreOffice ... Dhammaan howlaha ka socda LibreOffice Menubar waan dhigay ama waxaan doonayaa inaan dhigo talooyinka, taasi meel yar ayuu badbaadiyaa.
Ribbon oo Ingiriis ah waxaa loola jeedaa RIBBON. Sanduuq kasta shaqooyinka XAFIISKA waxaa loo qaybiyaa waxaa loo yaqaan 'RIBBON link' xiriiriyeyaashaas waxaa kala sooca kuwa wax kala sooca.
Ma hayno shaqooyinka uu hayo MICROSOFT ee loo adeegsado XAFIISKA 2010, maktabadaha MICROSOFT ayaa ka horumarsan….
Gtk 3 wuu xadidan yahay sidaa darteed waa inaan dhigaa 2 TOOLBARS caadi ah tab kasta oo la jaan qaadaya xaddidaadaha Gtk.
Kala hadal DADKA LibreOffice qaabkeeda waxaa lagu qoraa VCL taas oo nasiib darro aan la jaan qaadi karin Gtk ama Qt.
Horumarinta LibreOffice waa inay bartaan maktabadaha Gtk.
Laakiin waxay muujineysaa inay tahay dhejis.
Waxa kale oo aad samayn kartaa interface Paulo, oo la mid ah aasaasiga, waan sameeyay oo dad badan ayaa dhajiya.
Laakiin NETBOOKS sifiican ugama muuqanaynin maxaa yeelay waa inaan iska yareeyaa badhanka iyo aaladaha loo adeegsado shaashadaha la dhimay.
Marka waan haystaa… .. Laakiin waa inaan dib ugu qoro Gtk 3, taas oo ah, beddelo jumladaha.
Ma tahay bisadii madoobaa? Hadday sidaas tahay, waan kugu hambalyeynayaa shaqadaada cajiibka ah.
Aad ayaad u mahadsantahay . Pavloco.
Iyagu waa barnaamijyo yaryar oo muujinaya sida u eg garaafka muuqaalku u eg yahay.
Kaliya waxaan tuurayaa fikradda.
Markaan waqti helo ayaan isku dayi doonaa inaan soo rogo jees jees is-fulin ah. Sida soo jeedinta Pauloup
Marka waad arki kartaa sida is dhex galka uu u ekaan karo dhinac dhinac bidix ah.
Nasiib baan kuu rajaynayaa.
Salaan ……… Mariano Gaudix.
Runtii waan jeclahay sida ay umuuqato. hadday u egtahay, waxay guul weyn u noqon lahayd LibreOffice.
Waxay yiraahdaan horumariyayaashu waxay rabaan wax laga isticmaali karo aaladaha taabashada iyo websaydhka, sidaa darteed fikraddaasi waxay noqon kartaa, sikastaba shakhsiyan waxaan u maleynayaa in isdhexgalka ugufiican ee xafiiska bilaashka ah uu lahaan karo horeyba loo alifay waana midda adeegsata IBM's lotus symphony, kaliya ma aqaano inay lahaansho leedahay iyo in loo geyn karo xafiiska bilaashka ah
Waxaan u maleynayaa in lotus symphony loogu deeqay Apache Foundation, marka waa hubaal inay heysato shatiga Apache oo aad ugu eg liisanka BSD.
Haa, waxay ku deeqeen waqti dheer kahor: https://blog.desdelinux.net/ibm-dona-lotus-symphony-a-openoffice/
Ma keligay baa aniga oo aan i jeclayn? 🙁
Waa hagaag, maadaama aan nahay, dib u qaabeyn guud oo isku xir ah ma xumaan doonto. Maktabadaha LibreOffice waxay u isticmaashaa inay ku dhisto is-dhexgalka waa ceeb (gaar ahaan KDE). Iyadoo GTK + 3, ama ka sii wanaagsan, Qt, ma fahmin sababta ay codsiyo badan u sii wadaan maktabadihii hore. Haa, waan ogahay inay tahay shaqo aad u weyn, laakiin waxaan u maleynayaa in waxtarka xilliga dhexe uu muuqan doono.
Waxaan rabaa caawimaad, ma doonayo inaan dib ugu laabto W $ ama M $ Off ...
Waan ku faraxsanahay LinuxMint-13-KDE-64 waxaanan isticmaalaa LibreOffice 3.6.1.2 ilaa iyo hada wax walbo waa hagaagsan yihiin laakiin waxaa dhacda markaan si toos ah uga daabaco Qorahayga meesha aan dhigay midab ama sawirada B&W waxaan helayaa sanduuq madow, laakiin hadaan sameeyo gudaha W $ oo leh M $ Of haddii ay si sax ah u daabacdo, waxaan baaray dhammaanba bogagga mana heli karo sida loo sameeyo daabacaadda sawirka u dhigma halkii sanduuq ka buuxa khad madow.
Fadlan, haddii qof haysto buug ama hage, waxaan kaa codsanayaa inaad i caawiso, haddii kale, in badan oo aan ka qoomameynayo, waa inaan dib ugu noqdaa nacaybka W7 iyo M $ Off maxaa yeelay shaqadaydu waxay ku saleysan tahay waxyaabaha aan qoro oo daabaco.
isku dhafan dijo
Runtii aad baad u mahadsan tahay. Waxaan runtii rabay inaan siiyo LibreOffice muuqaal kale
Ku jawaab kompo
Nexphone: taleefan, kiniin iyo laptop dhan oo isku wada jira